Izindaba - Ngabe ukuhlobisa kweWPC kungapendwa?
Ukuhlobisa i-WPC kufushane izinkuni plastic kanye decking esiyinhlanganisela, ithandwa kakhulu emhlabeni wonke.Uma sichaza ukuhlobisa okuhlanganisiwe, sihlala sithi i-WPC decking akuyona umdwebo, akukho glue, ukugcinwa okuphansi.Mhlawumbe omunye umuntu uzodida ukuthi amabhodi we-WPC angahle apendwe? , ungapenda kanjani ukuhlobisa kwangaphandle kwe-WPC?
Vele singapenda umugqa ohlanganisiwe, ungafana nolunye ukhuni oluqinile.Sezinye izikhathi sifuna omunye umbala noma ukuhloba kwakho okuhlanganisiwe kukhombisa ukufiphala okuthile, mhlawumbe isikhathi sokuthatha izinto ezandleni zakho.Ufanele ulungise ibhulashi, upende namanye amathuluzi adingekayo.Sibe sesiqala ukupenda yethu ukuhlobisa ngaphandle kwe-WPC.
Okokuqala: Susa noma umboze izitshalo.Uma unehlathi ehlathini lakho le-WPC, uzodinga ukumboza nawo wonke amahlamvu ngendwangu noma izindwangu zokudonsa zepulasitiki noma uzisuse WPC phansi.
Okwesibili: Hlanza i-deck.some WPC board akho ayisebenzisela okwakho, ungahlanza kalula i-WPC decking yakho njengoba ulungiselela ukupenda.Ukuthola imfucumfucu eyisisekelo nokuhlanza ukungcola, sebenzisa ingxube yamanzi enensipho kanye ne-washer yamandla kagesi aphansi noma ibhulashi elithambile. Ukuze ususe isikhutha nesikhunta, uzofuna ukuxuba izingxenye ezimbili zeviniga kanye nengxenye eyodwa yamanzi ebhakedeni. Hlanza kahle bese uyoma.
Okwesithathu: Sanda idokodo lakho eliyinhlanganisela bese uliqhakambisa.Ukuze usebenzise ijazi elibushelelezi ngopende, ungafaka isihlabathi sakho se-WPC decking esiya endaweni yokusanhlamvu ukuze ulahle futhi ubhebhethekise amabhodi wokuhlobisa. Qiniseka ukuthi usula ukushefa nge umshanelo bese ugeza ngamanzi futhi.Khetha i-acrylic latex yangaphandle yangaphambilini bese uthela ibhakede kuthileyi lakho lokugwedla.
Okwesine: Paint your ukuhlobisa ngaphandle kwe-WPCLapho i-primer ingama-100% eyomile, ungathela
upende wakho ongaphandle kupreyi we-roller bese ufika emsebenzini.Okunye futhi, qiniseka ukuvumela uhlelo lokuqala ukuthi lome ngokuphelele ngaphambi kokungeza ijazi lesibili.Izikhathi zokoma zehlukile.so udinga ukubheka ilebula lomkhiqizo ngezikhathi ezinconyiwe zokufaka ijazi.
Ngaphezu kwalokho, yimuphi umbala owufunayo, vele ulungiselele umdwebo kuqala.Themba ungaba nempilo yemvelo ethe xaxa ngemikhiqizo ye-WPC.
ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC decking esiyinhlanganisela, Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle, WPC decking phansi, WPC phansi, WPC decking ongaphandle,